Kandawgyi Lake - Sylt 360°
Der Kandawgyi-See ist einer von zwei großen Seen in Yangon, Myanmar. Der See liegt östlich der Shwedagon-Pagode und ist künstlich angelegt. Das Wasser vom Inya-See wird durch eine Reihe von Rohren zum Kandawgyi-See geleitet.
Im Original: Ich versteh kein Wort aber ich finde die Schrift schön:
ကန်တော်ကြီး ကန် သည် ရန်ကုန်မြို့တွင်ရှိပြီး အင်းလျားကန် ပြီးလျင် ဒုတိယအကြီးဆုံးကန် ဖြစ်သည်။ ရွှေတိဂုံဘုရား၏ အရှေ့ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး အင်းလျားကန်ကို ရေပိုက်များဖြင့် ဆက်သွယ်ထားသည်။
၁၁၄၇ ခုနှစ် (မြန်မာ?၊ ကောဇာ?) ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက်တွင် ရန်ကုန်ဝန် ဦးရွှေရေး က မြို့သူမြို့သားများ ကျန်းမာရေး အတွက် ရေကောင်းရေသန့် ရစေရန် တူးဖော်သည်။ ဗြိတိသျှ ရန်ကို ကာကွယ်ရန် မွေးမြူထားသော ဆင်၊ မြင်း၊ ကျွဲ၊ နွားများ အသုံးပြုရန် အတွက် ထပ်မံတူးဖော်သော ကန် ကို ကန်တော်ကလေး ဟု အမည်တွင်စေသည်။ 
ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေး တပ်မြေတွေကို ရေသန့်ရရှိစေရန် ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပြီး ခန့်မှန်း အဝန်း ၅ မိုင်နှင့်၈ ကီလိုမီတာ ရှိသည်။
၁၅၀ ဧကခန့်ရှိသည့် ကန်တော်ကြီး တဝိုက် တွင် ၁၁၀ ဧက ရှိသည့် မြေပဒေသာကျွန်း ၊ ဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံ၊ ကရဝိတ်၊ ပန်းကန်လုံးကျွန်း၊ ချစ်သူများကျွန်း၊ ရန်ကုန် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် ၊ ငါးပြတိုက်၊ သံရုံးများ၊ ဆေးရုံများ နှင့် အဆင့်မြင့် ဟော်တယ်များ တည်ရှိသည်။ မြောက်ဘက် နှင့် အရှေ့ဘက် တွင် နတ်မောက်လမ်း၊ အနောက်ဘက် တွင် ဗဟန်း လမ်း၊ တောင်ဘက်တွင် ကန်ရိပ်သာလမ်း တို့ တည်ရှိသည်။ ယခင် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် လက်ထက် က နိုင်ငံတော် အဆင့် မြန်မာ့ရိုးရာ လှေလှော်ပြိုင်ပွဲ များ လည်း ကျင်းပခဲ့သည်။ ကရဝိတ် သည် ကန်တော်ကြီးတဝိုက် အထင်ရှားဆုံးနေရာ တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
၁၆ ရက် ဧပြီ ၂၀၁၀ မြန်မာ့သင်္ကြန် ညနေပိုင်း မှာ ဗုံးသုံးလုံး ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ၂၄ ယောက်သေဆုံး၍ ၆၀ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
Location MyanmarPosted in MyanmarTagged Sehenswürdigkeit